Kalluunka waa degel ay leedahay AB Internetka, kuna takhasusay noocyada kalluunka ee kala duwan ee jira iyo sidoo kale daryeelka ay u baahan yihiin. Haddii aad rabto inaad barato sida loo daryeelo iyaga si sax ah waxaan ku bari doonaa sida loo sameeyo si aad ugu raaxeysato aquarium-yada aan waligood hore u dhicin. Miyaad seegaysaa?
Kooxda tifaftirka De Peces waxay ka kooban tahay koox kalluunka jecel, oo had iyo jeer ku siin doona talada ugu fiican si aad u daryeeshid sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Haddii aad xiisaynayso inaad nala shaqayso, buuxi foomka soo socda waana kula soo xiriiri doonaa.
Barashada cilmiga deegaanka waxay i siisay aragti ka duwan xayawaanka iyo daryeelkooda. Anigu waxaan ka mid ahay kuwa u maleynaya inaad kalluunka u haysan karto sida xayawaanka guriga jooga, illaa inta la siinayo xoogaa daryeel ah si ay xaaladdooda nololeed ula mid noqoto nidaamyadooda deegaanka ee dabiiciga ah, laakiin iyada oo aan lahayn curyaannimo ay tahay inay noolaadaan oo ay raadiyaan cunto. Adduunyada kalluunku waa mid xiiso leh oo aniga ila ah waxaad awood u yeelan doontaa inaad wax walba ka ogaato.
Waxaan ahay Colombian, jecel xoolaha guud ahaan iyo gaar ahaan kalluunka. Waan jeclahay inaan ogaado noocyada kala duwan, iyo inaan barto sida ugu fiican ee aan u daryeeli karo waana ogahay si aan caafimaad iyo farxad ugu sii ahaado, maadaama kalluunka, in kasta oo uu yar yahay, uu u baahan yahay daryeel si uu u fiicnaado
Kalluunku waa makhluuqaadkaas cajiibka ah ee aad aduunka kaga arki karto dhinac kale illaa heer aad waxbadan ka barato dhaqankooda. Dunida xayawaanku waa mid soo jiidasho leh sida dunida aadanaha in badan oo ka mid ahna waxay ku siiyaan jacayl, shirkad, daacadnimo iyo wixii ka sarreeya oo ay ku baraan in daqiiqado badan ay neefta kaa qaadi karaan. Si kastaba ha noqotee, waa inaan iloobin kalluunka iyo dhaqankooda, waa sababta aan halkaan u joogo, diyaar ugu ahay inaan la wadaago dunidan cajiibka ah.
Xamaasad badan u leh dabeecadda iyo dunida xayawaanka, waxaan jeclahay barashada iyo ka sheekeynta waxyaalo cusub oo ku saabsan kalluunka, xayawaannada laga bixi karo, laakiin sidoo kale la wadaagi karo. Oo haddaad taqaanid sida loola dhaqmo, kalluunkaaga waxaa hubaal ah inuu nolosha ku fiicnaan doono.
Kalluunka waan jeclaa muddo dheer. Ha ahaato kuleyl ama qabow, macaan ama cusbo, dhammaantood waxay leeyihiin astaamo iyo dariiq aan ku jeclahay. U sheegida wax kasta oo aan ka aqaan kalluunka waa wax aan aad ugu raaxeysto.
Waxaan jecelahay in aan sanqadhyoodo oo aan ku dabaalo badda marka aysan jirin jellyfish. Dadka deggan badda ee aan jeclahay waxaa ka mid ah shark, aad bay u qurux badan yihiin! Waxayna dilaan dad aad uga yar qumbaha!
Waan ku raaxaystaa wax ka qorista xayawaanka waxaanan aad u jeclahay adduunka kalluunka, taas oo ii horseedaysa cilmi baaris waxaanan doonayaa inaan la wadaago aqoontayda iyaga ku saabsan.
Waxaan dhashay 1981 waana jeclahay xayawaannada, gaar ahaan kalluunka. Waxaan jeclahay inaan ogaado wax walba oo iyaga ku saabsan, maahan oo kaliya sida ay iyagu isu daryeelaan, laakiin sidoo kale sida ay dhaqankoodu tusaale u yihiin. Iyagu waa dad aad u xiiso badan, daryeel yarna runtii way ku farxi karaan.